ထိပ်တန်း (၂၀) ​​စီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့အမည်ရှိ | Martech Zone
ထိပ်တန်း (၂၀) ​​စီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့အမည်ရှိ!
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
BuyerZone မှရှေးရှေးများသည်သူတို့၏စာရင်းကိုအတူတကွစုစည်းထားကြသည် ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 20 စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်များ ကျနော်တို့ # 17 မှာညှစ်ခြင်း, ဖြတ်စေရန်ဤမျှလောက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကျေးဇူးတင်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ယခုအချိန်အထိကြီးစွာသောတစ်နှစ်ရရှိခဲ့သည် ... တစ်ရရှိခဲ့ပြီးလျှင် ထိပ်ဆုံးလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ (၁၀) ခု အဖြစ်ကောင်းစွာ!
BuyerZone ၏ထိပ်တန်းစီးပွါးရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ (၂၀)
MarketingProfs Daily Fix ဘလော့ဂ်
CK ၏ (B2B) ဘလော့ဂ်
အဆိုပါ Genius ဘလော့ဂ်
Vital Design ဘလော့
BlogNotions စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Blog
ရှေ Godin ရဲ့ဘလော့
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဝိုင်းရံထားခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာကောင်းသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤဘလော့ဂ်များကိုမလိုက်နာပါက၎င်းတို့ကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ ကျနော်တို့ကနေအများကြီးသင်ယူနေစဉ် ဖောက်သည်များနှင့်အတူအမှန်တကယ်အလုပ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏စျေးကွက်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းကိုလည်းအနည်းငယ်မှီခိုသည်။
တင်ပြချက် - Infographics ၏စွမ်းအား
ဂျက်ဖ် Downer Indianapolis IN
24:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 41 တွင်
ဂုဏ်ယူပါတယ် ကောင်းစွာရရှိခဲ့သည်။ သင်သည်ငါ၏အမှတ်အသားပြုစာရင်းတွင်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
25:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 24 တွင်
ဂုဏ်ယူပါတယ် တကယ်ကိုခိုင်မာသောအကြောင်းအရာဖြင့်အောက်ပါတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်သင်အလွန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုတခြားသူတွေသတိပြုမိတာကိုမြင်ရတာဝမ်းသာပါတယ်